Vampires: Los Muertos (2002) - KyiMal TV
Home / Movies / Vampires: Los Muertos (2002)
ဒီတစ်ကားကတော့2002က ထွက်ထားတဲ့ horror vampire filmလေးပါ ဇာတ်ကားလေးကတော့ ရိုးရှင်းပါတယ် ညညဆို သွေးလိုက်သောက်တဲ့ သွေးစုပ်ဖုတ်ကောင်တွေကို အဖွဲ့ အစည်းတစ်ခုကနေ အခကြေးငွေယူပြီး လိုက်သတ်ပေးရတာပေါ့
အဓိက ဇတ်ကားကတော့ ဒရက်လ်ပါ သူက ဖုတ်ကောင်တွေ အများအပြား သတ်ပြီး တစ်နေ့မှာတော့ တအားစွမ်းတဲ့ ဖုတ်ကောင် ကို သတ်ရမယ်ဆိုပြီး အလုပ်ရခဲ့ပါတယ် ဖုတ်ကောင်တွေက တအားများတဲ့ အတွက် ဒရက်ခ်ဟာ အဖွဲ့လိုက် လှုပ်ရှားဖို့အတွက် အဖွဲ့ဖွဲ့ရပါတော့တယ် ဒါပေမဲ့ အိတ်ပေါက်နဲ့ ဖားကောက်လို့ပဲ ဆိုရတော့မလား သူ သွားခေါ်တဲ့ လူတိုင်းက သွေးစုပ်ဖုတ်ကောင်လက်ချက်နဲ့ ပဲ သေသေသွားပါတယ်
ဒါပေမဲ့ သွေးစုပ်တဲ့ ကောင်တွေက ဒရက်လ်ကို မသတ်ပါဘူး…သူသွားချင်တဲ့နေရာကို ပေးသွားပြီး..သူထွက်သွားပြီဆိုတာနဲ့ သူ့အနားမှာ ရှိသမျှ လူမှန်သမျှကို သတ်ဖြတ်ပါတော့တယ်….
ဒီတစ်ခါတော့ ဖုတ်ကောင်သတ်ကျွမ်းတဲ့ ဒရက်လ်ဟာ တိုင်ပတ်ပါတော့တယ်…သူ အဖွဲ့ကော ဖွဲ့နိုင်ပါ့မလား…?
သူ့ထပ် အစစအရာရာ ခြေတစ်ဖျားသား သာနေတဲ့ ဖုတ်ကောင်ကို ကော သတ်နိုင်ပါ့မလား…?
ဖုတ်ကောင်ရဲ့ အကြံအစည်ကကော ဘာလဲ…VFX effectsတွေ မပါတဲ့ ၂၀၀၂က အကောင်းဆုံး ရုပ်ရှင်ဖြစ်တဲ့ ဒီvampireကားထဲမှာ ဘာတွေ ဆက်ဖြစ်မလဲဆိုတာ kyimal.tvကနေကြည့်လိုက်ရအောင်နော်
Reviewed & Translated by Htet Kyaw
Stars: Anilú Pardo, Antonio Muñiz, Arly Jover, Cristián de la Fuente, Darius McCrary, Diego Luna, Javier Grajeda, Jon Bon Jovi, Muriel Fouilland, Natasha Gregson Wagner
Gallery Vampires: Los Muertos (2002)
shwedrive Myanmar 1080p 1.73 GB Download shwedrive Myanmar 720p 892.12 MB Download shwedrive Myanmar 480p 469.33 MB Download mahar Myanmar 1080p 1.73 GB Download mahar Myanmar 720p 892.12 MB Download mahar Myanmar 480p 469.33 MB Download fastdrive Myanmar 1080p 1.73 GB Download fastdrive Myanmar 720p 892.12 MB Download fastdrive Myanmar 480p 469.33 MB Download kyimal Myanmar 1080p 1.73 GB Download kyimal Myanmar 720p 892.12 MB Download kyimal Myanmar 480p 469.33 MB Download burmadrive Myanmar 1080p 1.73 GB Download burmadrive Myanmar 720p 892.12 MB Download burmadrive Myanmar 480p 469.33 MB Download megaup Myanmar 1080p 1.73 GB Download megaup Myanmar 720p 892.12 MB Download megaup Myanmar 480p 469.33 MB Download doodstream Myanmar 1080p 1.73 GB Download doodstream Myanmar 720p 892.12 MB Download doodstream Myanmar 480p 469.33 MB Download
Liang Xuan,Zhang Chun
2021 S1 EP15 TV